i-CSA imemezela iqembu lama-U19 le-triangular series ne-England ne-Namibia
NgoLwesibili i-Cricket South Africa, imemezele iqembu le-Coca-Cola South Africa U19 elizodlala ne-England ne-Namibia kwimidlalo emihlanu ye-Youth One-Day International (ODI) Triangular Series kusukela ngo-30 November kuye ku-10 December 2017 e-Potchefstroom.
I-series izoba ithuba lokugcina lokuthi abakhethayo babheke abangadlala kwi-ICC U19 World Cup ezodlalelwa e-New Zealand ngo-2018.
u-Raynard van Tonder uzoba ukapteni weqembu okwesibili futhi ulibhekile lelithuba lesibili lokuhola futhi uthemba ukuthi anganqoba. Labadlali abancane bashodelwa ama-runs amabili ukunqoba umdlalo wokugcine emidlalweni amihlanu bedlala ne-West Indies ngo-June kulonyaka, bahlulwa ngo-3-2 kwi-series bedlala nabavikela isicoco.
“Kwakunzima ukwamukela ukuhlulwa kwi-series eThekwini sidlala ne-Windies, kodwa kube nekhilikithi eningi kusukela lapho kanye nokukhulu futhi hayi kimina kuphela, kodwa neqembu,” kuphawula u-Van Tonder. “Ngikubhekile ukuphinde ngibe ukapteni wabafana futhi, ngakujabulela ukuhola futhi ngafunda okuningi. Manje ngifuna ukuthatha lokhu engakufunda futhi ngikusebenzise kule-triangular series.”
“Abafana bajabulile futhi name ngijabulile, i-England kanye ne-Namibia banzima futhi yilokho esikudingayo ngaphambi kwe-World Cup.”
Umqeqeshi, u-Lawrence Mahatlane ukholwa ukuthi bathole ukulingana okulungile ngokuhlangana kwabasha kanye nabanesipiliyoni futhi ukulindele ukubona ukuthi iqembu lakhe lizoqhuba kanjani nezifundo alazithola kuvakashe i-Windies.
“Ngiyajabula ngeqembu elihlanganisiwe abakhethayo,” esho. “Ngizwa sinabadlali abalungile kuzona zonke izigameko ezingabakhona kanye neqembu labadlali abasha abanomfutho. I-series izophinde ibe umsebenzi onzima kubadlali futhi indlela esizinikela ngayo kanye namakhono ethu kuzobaluleka.”
“Kuningi esikudlalelayo, uma ucabanga ukuthi sizohambela i-U19 World Cup esontweni lokuqala ku-January ngonyaka ozayo, kodwa kimina okwamanje, ukunqoba i-series kanye nokuqiniseka ukuthi siwenzile umsebenzi wezivivinyo esizobhekana nazo.”
Umqeqeshi uyawathemba amathuba iqembu kwi-triangula series futhi unelisekile ngogqozi oluvezwe abadlali kumakhempu ezinyangeni ezidlulile.
“Kwenza iqembu lithembise. Sengibonile ukuthi bakufuna kangakanani uma sihlangana kanye nendlela enhle abayithathile ezinyangeni ezibalulekile. Kuyangijabulisa ukubona ukuthi bazolethani uma sebebhekene namaqembu aqinile e-England ne-Namibia,” esho evala.
Ukuhlulwa i-West Indies kwi-U19 series kumlimazile u-Mahatlane u-Breetzke ushaya ikhulu kodwa i-West Indies inqoba i-U19 series i-South Africa Under-19 ibheka ukushaya okufanayo West Indies ilinganise i-series ePietermaritzburg uMahatlane: Okuhle kudlula okubi i-West Indies ilinganisa i-series yama-U19 uPeterson ujabule ngamalungiselelo e-SA U19 Ikhulu lika-Van Tonder iholela i-SA U19 ukunqoba umdlalo wokuqala Ukuguquka kwe-SA U19s kuletha ukunqoba okuthembisayo